अपहरणकारी पक्रिने इन्स्पेक्टर गोविन्द पन्थी प्रहरी प्रधान कार्यालय भित्रै १५ दिन देखि थुनामा किन ?? | शुभ दिन
अपहरणकारी पक्रिने इन्स्पेक्टर गोविन्द पन्थी प्रहरी प्रधान कार्यालय भित्रै १५ दिन देखि थुनामा किन ??
शुभदिन संवाददाता February 22, 2018 (22 Feb, 2018)
नेपाल प्रहरीको काम कर्तब्य नै अपराध नियन्त्रण गर्नु हो । तर त्यही अपराध नियन्त्रण गरेबापत पुरस्कृत हुनुपर्ने एक प्रहरी अधिकृत १५ दिनदेखि आफ्नै कार्यालयमा थुनिएका छन् ।
बाहिर निस्केपछि मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने सिंहले पन्थीलाई कारबाही गर्नैपर्ने बताएपछि आइजिपी अर्यालले अपराधी समातेबापत प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही गर्ने निर्णय लिएका हुन् । रवि सिंहले उच्च प्रहरी अधिकृतको पैसा पनि मिटर ब्याजमा लगाएको स्रोतले बताएको छ । नयाँपेज बाट